Swasthani Bratakatha: A Letter to Daughter – RADHA PAUDEL
Swasthani Bratakatha: A Letter to Daughter
मिठोसम्झना र माया ।
तिमीलाईलाग्दो हो यो महिलाकती किच किच गरेकीछे। ,dलाई लागिरहेको छकस्तो बिडम्बना हो । मैलेनबोले कल्ले बोल्ला अनी अहिले नबोलेकहिले बोल्ने भनेर यो पत्रकोर्दैछु किन्भने म तिम्रो फेस्बुकको अपडेटले तर्सिएको छु । तिमीलाईपनि स्व्सोतनी ब्रतकथामा सामेल् हुन नपाएर छट्पटीभएको छ, तिम्रा हितैसीहरुलेबेलायत र अमेरिकाबाट चिचfएकf छन; हेअगस्तमुनी …………………कुमार जी आग्या गर्नुहुन्छ…..
सकीनसकी, भ्याइ नभ्याइ कुनै मन्दिर वाजमघट वा साखु सालीनदीजानु मन छ भनेhfp . मनजाउ भन्दिन, जान हुन्न भन्दिन, जानु पर्छ , एस्तो कृयाकलाप महत्वपूर्ण छ किन कितिमीले साथी भाई चिन्नुपर्छ, उनिहरुको भावना, बिचार रअभ्यास कस्तो रहेछ थाxf पाउनुजरुरी छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरात्यहाँ भेला भएका सबैमानिस् धर्म गर्न आएकाहुन कि अरु कुनैस्वार्थ छ त्यो पनिबुझ्नु जरुरी छ। सबै भन्दाखाटी कुरो त धर्मगर्ने अाउनेहरुलाई साचिक्कै उनिहरुले धर्म गरिरहेका छनकि छैनन वा समाजलाईसकरात्मक् वा नकारात्मक कतातिरलाग्दैछन सो बुझ्नु पर्दछ।
तर यि सबै कुराकोसुची पुरा गर्नु अघीपहिले तिमी त्यो स्वस्थानीब्रतकथा पड, तिमी अङ्रेजीभाषामा पडेकी हुनाले केही समय लाग्नसक्छ, सुन्न मन भये सुन्नपनि पाईन्छ ईन्टरनेटमा । हतार नगर्नू। पड्दै गर्दा केही प्रश्नहरु मननगर्नु; कथा कहिले लेखिएकोहोला, तिम्रो साईन्स मा भनेजस्तो लाखौंबर्ष पहिले कि, टि.भी, फोन , वा जिब बिज्ञानकोशिछण् हुन थालेपछी वाकहिले ? घोत्लिएर खोज्नु मान्छे कसरी जन्मन्छ ? सोच्नुतिमी बिज्ञानमा विश्वाश गर्छौ कि प्रकिर्तिमा किअन्य कुन दर्शनमा ? फेरीसोच्नु तिमीले प्रयोग गर्ने सबै बस्तु कल्लेबनायो ; बिज्ञान, धर्म, प्रकिर्ती आदी आदी ।सोच्नु त्यहाँ तिमी जस्तै केटीछन कि छैनन, केटीकोभूमिका के हो, उस्लेआफ्नो निर्डय गर्न पाउछे किपाउन्न, उस्को शरीर, सम्पत्तिमा अधिकार हुन्छ कि हुन्न ? तिमीलेअधिकार प्रयोग गरे तिमीले सजायपाउने हो कि पुर्स्कार। यो पनि सोच्नुविवाह कहिले गर्ने हो ? बहु विवाहतिमीलाई स्वैकार्य छ कि छैन? के लोग्ने मनिषहरु यो वा त्योबहनामा बहु विवाह गर्नसक्छन वा गर्नु हुन्छ? के ध्यान गर्दैमा, पूजा गर्दैमा कसैलेबिना परीश्रम सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ ? के बिना पसिनाकोसम्पत्ति भ्रस्ट् सम्प्ती हो कि वाकुनै ?
सम्झनुतिमी कुन सताब्दिमा हिड्दैछौ? तिमीले बिदेशमा रहदा बस्दा तिमीलेके देखेकी छौ, कती पटकरमाउन सकेयू तिमी अनी कतीपटक तिम्रा आँखा रसाये , तिमीकती पटक हेपिएउ , तिमीकती रात् चोट लागेकोस्वाभिमान च्यापेर सुक्क सुक्कायेका छौ।
मैलेएसो भनिरहदा तिम्रा साथी मसित रिस्लेमुर्मुरिन सक्नेछन कतै तिमी पनिउनिहरुको प्रभाब् मा पर्नेछौ, मलाईगाली गर्न सक्नेछौ अनीमलाई गाली गर्नेहरु मौरिकोगोलो खनिएझै खनिन सक्नेछन तरपनि हतास नहुनु रस्वस्थानी ब्रतकथाका एक एक पक्तिकाअर्थ खोज्नु, जिबन खोज्नु, बिदेशर नेपालको बिकासको तुलना गर्नु ।मैले तिमीलाई धर्म नगरने भनेकोहैन, हाम्रो हिन्दू धर्म खतम छभनेको हैन। धर्मले जिबनदिनु पर्छ, नयाँ पुस्तका लागिगोरेटो खन्नु पर्छ । नेपालमाआजको दिन्मा देखिएको बाल विवाह, चाडोविवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह, केएही ब्रतकथाको पारिडाम् होत ? केयि सबैको धरातल स्वस्थानीब्रतकथा नैहो त ?
यि सबै प्रश्नहरुको उत्तरखोजेर तिमी जानु सालीनदिमा। त्यहाँ पनि तिमी एसैजान पाउनउनौ अर्थात तिमी केही प्रश्नहरुलिएर जाउ। हेर सालीनदी कसरी बगेकी छनअर्थात बग्न सकेकी छनकि छैनन ? तिमीलाई बग्न नसकेकी सालीनदी प्रती सन्का लाग्छ भने मात्रै आधीघण्टा हिंडेर नदिको मुहfन तिरजानु कस्ती छ साली नदी? धर्मfलुले साली नदीमैलाएकी साली नदिले धर्मfलुलाई ।हेर्नु धर्म गर्ने आउनेहरुलाई– उनिहरुले फल्फुल्का बोक्रf, कागत, पलास्टिककहाँ थन्काउछन्, चर्पी कहाँ जान्छन, खानेकुराके र कसरी खान्छन। उनिहरुको बहनामा आउने अरु पसलेहरुकोफोहोर बेब्स्थापना कस्तो छ। बिदेश्मा मन्दिरहोस् वा चर्चा वामस्जिद कती सफा रसुन्दर हुन्छ, खै हाम्रा धर्मका गयो । धर्मगरे भनेर भनिरहदा उल्तैप्रकिर्तिको धर्म, समाजको रुप, भाबी पुस्ताकोअधिकार खोसिरहेको भान हुन्छ। तिमीलाईनलाग्न सक्छ तर मलाईबागमती सफै अभियानकf अगुवापूर्व सचिब लीलामनीपौडेल सँग पनि दिक्कलागेर आउछ। बागमती सफै२०१२ साल्देखी सुरु भएपनी समुदायकोबेक्ती अगुवा भएको छैन वासमुदायको बेक्तिले अगुवा लिन सक्छन वा समुदय्को अगुवामहत्वपूर्ण छ भनेर परिकल्पनापनि गरिएको छैन। फोहोर उतपादन्गर्नेहरु, खोलको छेउमा बस्नेहरुको नेत्रित्व स्विकारीदिएको भए, फोहोर फाल्नेहरुजिम्मेवारि हुने वा रहनेसस्कार् बसाएको भये अहिले सालीनदी हरेक माघ महिनाआएपछी किन सघुरिन्थ्यो, किनपिल्सिन्थ्यो ? तेसैले छोरी तिमी त्यस्तोअगुवा पनि नबन्नु अनीत्यस्तो हेरेर पनि नबस्नु ।साच्चिकै तिमीलाई नेपाललाई केही गरुभन्ने लागेकोछ भने साली नदीसफा बगाइदेउ अनी स्वस्थानी ब्रत्कथाकोपुनर्लेखन गरिदेउ । एक्कैसौ शताब्दिकोजसको हात हत्मा स्मार्टफोन छ, संसारलाई सेकेन्डसेकेन्डमा निहलिराहेको छ उस्ले एतीतर्कहिन कुरामा अल्मलिरहनु हुँदैन। एसरी अल्मलिनु वाअल्मलाउनु नै गलत कुरावा मेरो लागि पापहो ।
छोरीयो देशको पहिचान तिमीले र तिम्रो समुहलेफेर्नु पर्छ अब, असम्भबकेही छैन। थैल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, अमेरिका संगै जिउन सक्छ भनेहामी किन संगै जिउनसक्दैनौ ? तिमी जस्ता युवाहरुसधैं बिदेश जाने, पढ्ने, उतै बस्ने, नबसेपनि देशका लागि केही नगर्नेगर्दा गर्दै हाम्रो यो हालत भयो।हामीले जोगाउनु पर्ने सस्कार्, हामीले फुलाउनु पर्ने नाक अरु नैछन। हामीले मान्दै आएको धर्म भित्रएस्ता धेरै अभ्यास छनजुन संसारभर नै अनौठा रसंसारलाई नै जोड्न सक्नेमान्यता छन । सबैजात, धर्म, क्षेत्र आदिमा अभ्यास गरिएको सस्कार् मित लगाउने, सँगसंगै बच्ने, स्बैलाई समान हैसिएत्मा देख्नेहाम्रो सस्कार् हराएको छ जहाँ हामीशान्तिको लागि, द्वन्द बेबस्थापन् गर्न प्रयोग गर्नसकिन्छ। तेस्तै हामीले मान्ने चाड चाहे जुनसुकैजात्का लागि भनियोस, नेपालीसबैले मान्ने चलन, समुह समुहमामिलेर बस्ने, सहयोग गर्ने सस्कार् आदी आदी ।छोरी हामीले धेरै कुरा हामीलेआँफै गुमाएउ अर्थात देखाउन् कोशीस नै गरेनौ ।आफ्नो शिर ओस्त्रिच चरालेटाउको बलुवमा लुकाये झै हामीले पनिहाम्रो सभ्यता, हाम्रो सस्कार् लुकायेउ र बेक्तिगत नाफा, नोक्सानको लत्मा हाम्रो अस्तित्व मेटाएका छौ, म त्योभिड्मा एकलो भएको छु, मेरो आबज मेरै भन्नेहरुलेहावामा चुरोट्को हावासङै उडाइदिय, रक्सिको चुस्किमा उल्लैदिये तेसैले छोरी अब तिम्रोसाथ् चहिय्को छ अब मलाईर मेरो आमलाई अनीसबैको आमालाई।
छोरीमैले स्वस्थानी ब्रत्कथा पठाइदिएको छु सके पछी गरुनपुराण पनि पढ्नु रमलाई ईमेल गर्नु।
ज्यानकोख्याल गर्नु, अनी फेस्बुक अप्डेटगर्दै गर्नु ।
तिम्रोउही माया गर्ने आमा
Keep Intact your Dignity: A Letter to Daughter
मान्छे अचम्मैमा बाच्छ,